Michato yekuenda panguva yeCOVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Vanodanana Michato Honeymoons » Michato yekuenda panguva yeCOVID-19
Kuputsa US News • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • Kuvakazve • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kunyangwe kana paine coronavirus iri kutenderera pasirese, michato ichiri kutora nzvimbo yepakati kana zvasvika pakupemberera mubatanidzwa werudo. Nancy Barkley, muvambi uye muridzi weHoneymoons & Get-A-Nzira, uyo anomhanyisa iyo World Tourism Network (WTN) Chikwata Chekufarira Kwekuenda Michato uye Honeymoon Kufamba, kwakatungamira hurukuro pane ino niche iri bhizimusi hombe zvisinei nezviri kuitika munyika.
Moderator Juergen Steinmetz akaunza Nancy achiti: “Kazhinji tinongoroora kamwe chete muhupenyu hwedu, saka chinhu chakakosha uye chinofanirwa kutariswa zvakanyanya. Vanhu vakaita saNancy vanoziva vanhu chaivo mumaindasitiri kuti vavimbise mutambo wemuchato usingakanganwike.
Nancy akazvizivisa, achitenderera kubva kuPhiladelphia, Pennsylvania, achigovana kuti anga ari muindasitiri yekugamuchira vaenzi kwe25 makore Iye akasimbiswa Destination Yemuchato Kuronga uye Honeymoon Kuronga, uye iye zvakare anogara pabhodhi reInternational Destination Yemuchato Vagadziri Sangano. Akatanga bhizinesi rake muna 2005 aine rudo rwekufamba michato yekuenda.
Nancy akati: “Ndine chokwadi chekuti tese tine nyaya dzegore rapfuura pakaitika chirwere ichi. Ndinozviziva ini ndanga ndine vakawanda vakaroora vanokakama uye michato nekushushikana uye shanduko uye kukanzurwa, asi ini handidi kugara pane izvo. "Izvi ndezve tariro ye2021 uye kuenda kumberi."
Kutevera mafomati ehurukuro yekutenderera-tafura, teerera pane izvo Nancy nevaya vanopinda vanofanirwa kugovana nezve michato nehusiku, kutanga naMarian Muro, Director General weBarcelona Tourism Board.